सुबिसुले ल्यायो क्लियर टिभिमा २०० भन्दा बढी एचडी र डिजिटल च्यानल
२०७४ असार ६ मंगलबार, काठमाडौं । इन्टरनेट, नेटवर्क र टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसुले क्लियर टिभि सेवामा २०० भन्दा बढी एचडि तथा डिजिटल च्यानल ल्याएको छ । योसँगै कम्पनी नेपालकै सबैभन्दा बढी एचडि तथा डिजिटल च्यानल दिने प्रदायक बनेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ असार ५ सोमबार, काठमाडौं। एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, केन्द्रिय क्याम्पस पुल्चोकमा विभिन्न तीन संकायमा अध्ययन गरीरहेका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गरेको छ । आफ्नो व्यावसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत, एनसेलले युवा प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रलाई दक्ष जनशक्ति विकासमा योगदान पुर्याउन यो छात्रवृत्ति त ... बाँकी अंश»
‘विद्युतीय हस्ताक्षर’ प्रणाली लागू हुने
२०७४ असार ५ सोमबार, काठमाडौं। व्यवस्थित, प्रभावकारी र सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले उद्योग विभागले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। चार महिना अगाडिदेखि उद्योग दर्ताका लागि अनलाइन दर्ता सुरु गरेको विभागले अव अनलाइनमार्फत नै कागजपत्र प्रमाणीकरण गरेर सम्बन्धी निकायलाई अनलाइनमार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। ... बाँकी अंश»
मोवाइलमा चार्ज ढिलो भयो ? तीव्र गर्न अपनाउनुस् यी ९ उपाय
२०७४ असार ४ आइतबार, एजेन्सी । आजकाल मोवाइ वा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको गुनासो चार्ज ढिलो भयो भन्ने सुन्ने गरिन्छ । कयौ प्रयोगकर्ताहरु फोनको ब्याट्रि वा चार्जरमा खराबी आएर चार्ज ढिलो भएको मान्ने गर्दछन् । तर फोन चार्जको क्रममा प्रयोगकर्ताबाट पनि केहि यस्ता गल्ती हुने गरेका छन् जसको कारण चार्ज ढिलो हुने गर्दछ । यस्तोमा हामि तपाईलाई केहि टिप्स बताउदैछौ जसलाई अपनाए फोन तीव्र चार्ज हुनेछ । ... बाँकी अंश»
पाँच सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन अनुमति नवीकरण जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट हुने
२०७४ असार ४ आइतबार, पोखरा । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचना गर्ने काममा लागेको छ । ... बाँकी अंश»
एनसेलले ‘योण्डर क्याराओके प्रतियोगिता’ आयोजना गर्ने
२०७४ असार ४ आइतबार, काठमाडौं । एनसेलले गीत–संगीतका पारखीहरुलाई आफ्नो गायन प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्दै हरेक हप्ता ४ हप्तासम्म आकर्षक सामसुङ्ग जे सेभन प्राइम मोबाइल फोन जित्न सकिने ‘योण्डर क्याराओके प्रतियोगिता’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । ... बाँकी अंश»
'5G'का प्रयोगकर्ता सन् २०२२ मा ५५ करोड पुग्ने दावी
२०७४ असार २ शुक्रबार, एजेन्सी । विश्वभरमा सन् २०२२ सम्ममा करीब ५५० मिलियन अर्थात ५५ करोड 5G(फाइभ जी ) इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हुने संभावना एक अध्यायनले देखाएको छ । विश्वमै यो प्रबिधि आम जनतासम्म पुर्‍याउन अमेरिका सबै भन्दा अगाडि रहेको छ । सो कुराको खुलासा एरिक्सन मोबिलिटीको २०१७ को रिपोर्टमा गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
एनसेलले ल्यायो ‘वान प्लान’
२०७४ जेठ ३१ बुधबार, काठमाडौं । निजि कम्पनि एनसेलले साप्ताहिक ‘वान प्लान’ कम्बो प्याक ल्याएको छ । प्याक अन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकहरुले सुलभ दरमा भ्वाइस, डेटा, एसएमएस र योण्डर म्युजिक सेवाको मजा एकै प्याक मार्फत लिन सक्नेछन् । ... बाँकी अंश»
बिजुली छैन ? यसरी गर्नुहोस् कागतीबाट मोबाइल चार्ज (भिडियो)
२०७४ जेठ ३० मंगलबार, एजेन्सी । स्मार्टफोनमा ब्याट्रि ब्याक-अपलाई लिएर धेरै समस्या आउने गरेको छ। कहिले काहि बिजुली नहुदा फोन चार्ज गर्न दिक्दार हुन सक्छ तर अब तपाई कागतीको प्रयोग गरेर फोनलाई सजिलै चार्ज गर्ने सक्नुहुनेछ । ... बाँकी अंश»
गेमिङमा माइक्रोसफ्टको अर्को फड्को, यस्तो हुनेछ एक्स बक्स एक्स
२०७४ जेठ २९ सोमबार, एजेन्सी । माइक्रोसफ्टले आफ्नो गेमिङ कन्सोल रेन्जमा एक नयाँ कन्सोल एक्सबक्स एक्स ल्याएको छ । सो कन्सोलको प्राविधिक क्षमता बजारमा रहेका अन्य कन्सोल भन्दा निकै ज्यादा रहेको कम्पनिले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झामाथि आक्रमण प्रयास
२०७४ जेठ २९ सोमबार, काठमाडौँ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि आइतबार साँझ अनामनगरमा अज्ञात समूहले आक्रमणको प्रयास गरेको छ । ... बाँकी अंश»
अब घरमै बनाउन सकिन्छ माइक्रो सिम, अपनाउनुहोस यी ५ तरीका
२०७४ जेठ २८ आइतबार, एजेन्सी । टेक्नोलोजीमा आएको परिवर्तन सँगै धेरै स्मार्टफोनहरु माइक्रोसिम फिचरमा आउन थालेका छन् । त्यस्तै केहि मोबाइलहरु भने न्यानो सिममा पनि आएका छन‍् । ... बाँकी अंश»
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि ६ उपयोगी टिप्स, अब घरमै बन्छ मोबाइल
२०७४ जेठ २७ शनिबार, एजेन्सी । एन्ड्रोइडमा यस्ता कयौ फिचर रहेका छन् जसको मद्दतले तपाई आफ्नो स्मार्टफोन अझ स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ । हामि तपाईलाई यस्ता ६ सीक्रेट टिप्स बताउदै छौ जसको मद्दतले तपाई आफ्नो फोनमा यी फीचर्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ जेठ २७ शनिबार, एजेन्सी । आजकल वाई-फाई मानिसहरुको जिवनको हिस्सा बनेको छ । जस्तै बिजली र पानी बिना आजकल काम गर्न सकिन्न , त्यस्तै वाई-फाई बिना पनि काम चलाउन मुश्किल भएको छ । ... बाँकी अंश»
पाकिस्तान भन्दा भारतको 'फोरजी' सेवा झुर
२०७४ जेठ २५ बिहिबार, एजेन्सी । फोरजी सेवामा 'भारत' पाकिस्तान र श्रीलंका भन्दा तल रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कका अनुसार भारतका सबै टेलीकम अपरेटर्सको डाउनलोड स्पीडमा गिरावट आएको छ । ... बाँकी अंश»
छोरा-छोरिले फेसबुक चलाएर हैरान बनाए, अव रोक्ने एप्स आउने
२०७४ जेठ २५ बिहिबार, एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले किशोर–किशोरीका लागि अलग म्यासेन्जिङ ऐप्प ल्याउने भएको छ । उक्त एप्स आएसँगै तपाई फेसबुकमा आफ्ना बच्चाहरु माथि ध्यान मात्र नभएर निगरानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ । ... बाँकी अंश»
मोबाइलमा मेमोरी कम भएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस यी ६ उपाय
२०७४ जेठ २५ बिहिबार, एजेन्सी । हरेक स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले लो मेमोरीको समस्या भोगि रहेका हुन्छन् । अझ , सेटमा माइक्रो एसडि कार्ड नभए त इन्टरनल मेमोरी झनै चाडो भरिन्छ । ... बाँकी अंश»
जुडि भाइरसबाट ४ करोड एन्ड्रोइड फोन प्रभावित, बग पत्ता लगाए गुगलले २ लाख डलर दिने
२०७४ जेठ २१ आइतबार, एजेन्सी । जुडि नाम गरेको मालवेयर भाइरसबाट ३.६५ करोड एन्ड्रोइड फोन प्रभावित भएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ जेठ १२ शुक्रबार, काठमाडौ। देशकै अग्रणी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले गीत–संगीतका पारखीहरुलाई लाखौं गीतहरुमा निःशुल्क पहुँचको अबसर प्रदान गर्दै योण्डर म्युजिक एप नामक नयाँ डिजिटल प्लाटफर्म सार्वजनिक गरेको छ जस अन्र्तगत ग्राहकले अब धेरै भन्दा धेरै गीतहरु सुन्न तथा डाउनलोड गर्न सक्नेछन्। एनसेलले अमेरिका अवस्थित योण्डर म्युजिक ईङंकसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ग्राहकका लागि नेपालमा योण्डर म्युजिक एप ल्याएको हो। ... बाँकी अंश»
काठमाडौँमा महत्वको ‘वर्डक्याम्प’ हुँदै
२०७४ जेठ ४ बिहिबार, काठमाडौँ । काठमाडौँमा शनिबार विश्व विख्यात वेबसाइट बनाउने र सित्तैमा पाइने (Open source) सफ्टवेर ‘वर्डप्रेस (WordPress)’ सम्बन्धि एक दिने सेमिनार “वर्ड क्याम्प काठमाडौँ २०१७” हुँदैछ । ... बाँकी अंश»